Lifestyle – ICT.com.mm
Logitech Speaker Z213 (Black)K53,000
T-Home 50-Inch Andorid 4K TV (TH-LTV504D201T)K812,000
Electrolux E2TS1-100W2Slice Toaster (White)K67,000
Samsung 43" FHD Smart TV UA43T6003AKXXTK808,000
Anitech Multifunctional UV Sterilizer Box ST801K42,000
Logitech Speaker Z213 (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Logitech Colour: Black Type: Z213 Compact 2.1 Speaker System Warranty: 1 Year ရှင်းလင်းပြတ်သားသည့်အသံနှင့်အတူ Bass သံ အထူးကောင်းမွန်သည့် Logitech အမှတ်တံဆိပ် စပီကာ စနစ်ဖြစ်သည်။ ကြိုးဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည့် Control Pod ကိုအသုံးပြုပြီး Power, Volume...
T-Home 50-Inch Andorid 4K TV (TH-LTV504D201T)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Android 6.0 AOSP Memory/Flash: 1.5GByte DDR/ 8GB EMMC TV System: PAL B/G?D/K?I?NTSC-M?DVB-T/T2 AV System: PAL?NTSC Power Supply: AC 110V-240V 50/60Hz Certification: HDMI, Dolby(option) Internet Link: wireless WiFi...
Electrolux E2TS1-100W2Slice Toaster (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။7browning settings to suit all tastes in toast. Warming rack for baked goods. Power cord is neatly tucked under the toaster. Net Weight: 1.28 kg Warranty:...
Samsung 43" FHD Smart TV UA43T6003AKXXT
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Product Type: LED Series:5Display Screen Size: 43" Resolution: 1,920 x 1,080 Video Picture Engine: Hyper Real Motion Rate: 50 PQI (Picture Quality Index): 1000 HDR...
Anitech Multifunctional UV Sterilizer Box ST801
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Fit devices: up to 6.5 inch mobile phone Rated voltage: DC5V Input current: 1-2A Max working power: 9w UV wavelength: 253.7nm 9.Material:ABS Dimensions W x D x...
Anitech Electric Kettle S107-GY
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Material: Plastic Automatic shut - off 360 degree base, Voltage: 220-240V Power: 1850-2000W, Frequency: 50/60Hz Weight: 0.8kg, Cable length: 1m Dimension: (W)200 x (H)160 x (H)220 mm...
Panasonic NC-EG3000CSY Thermopot
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Water Capacity: 3.0L Interior: Charcoal coated non-stick interior(Premium Japanese carbon “BINCHO” plus Diamond fluorine coating) Temperature Settings: Approx. 208ºF (98ºC) Temperature Settings: Approx. 190ºF (90ºC) Temperature Settings:...
Electrolux 1.7L Create2kettle E2Ek1-100W (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Capacity (L): 1.7 Main Color: White Material/Colour: Plastic Product Type: Kettle Controls: Manual Installation Type: Freestanding Easy-open lid for simple filling and cleaning. Power crd is neatly...
Panasonic 55-Inch 4K Andriod TV (TH-55HX655K)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model No: TH-55HX655K Display Panel: 4K ULTRA HD LED LCD Wide Viewing Angle: Y Screen Resolution: 3,840 (W) x 2,160 (H) Panel Drive: DLED Picture Mode: Vivid /...
Dahua HiBoard-SMAH Screen Sharing Cable
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: HiBoard-SMAH Screen Sharing Cable Transmission distance 15m Transmission band 5GHz (recommended) / 2.4GHz One USB cable connection, drive free One-button press for instant sharing
Dahua PFM800B-4K 1-CH Passive Video Balun
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: PFM800B-4K 1-CH Passive Video 4K Balun Real-time transmission over UTP CAT5E/6 cable Passive, no need for power supply Excellent anti-thunder, anti-static and anti-interference capabilities Compatible format:...
Dahua PFM800-4K 1-CH Passive Video Balun
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: PFM800-4K 1-CH Passive Video 4K Balun Real-time transmission over UTP CAT5E/6 cable Passive, no need for power supply; Excellent anti-thunder, anti-static and anti-interference capabilities Compatible format:...
Dahua PFM800-E 1 Channel Passive HDCVI Balun
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: PFM800E 1 Channel Passive HDCVI Balun Real-time transmission over UTP CAT5E/6 cable. Passive, no need for power supply. With female BNC connector, and pluggable screw terminal connections....
Midea Electric Kettle MK-HJ1722AS
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Midea Product: Electric Kettle Model: MK-HJ1722AS Color: White Weight: 1.45kg Power: 1800~2150W Voltage /Frequency: 220V~240V , 50Hz Dimension: 24.1cmx18.7cmx27.8cm
LG 43-Inch UP75 4K Smart UHD TV 43UP7500PTC
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: 43UP7500PTC UHD Real 4K Quad Core Processor 4K ThinQ AI Sports Alert Bluetooth Surround Ready Type 4K UHD Screen Size: 43 Inch Resolution: 3840 x 2160...
LG 32-Inch M575B HD Smart TV 32LM575BPTC
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: 32LM575BPTC HD screen resolution 1 megapixel 1,366 x 768p Active HDR supports HDR images in both HDR 10 Pro and HLG formats. Resolution Upscaler enhances image...
LG LM57 43-Inch LM57 FHD TV 43LM5750PTC
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: 43LM5750PTC Dynamic color Enhancer Virtual Surround Plus Dolby Audio Quad Core Processor Magic Remote Voice Command Resolution: 1920x1080p RF antena: yes LAN port: yes USB in:...
Samsung 22Kg Top Loading Washing Machine WA22R8870GV/ST
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Stock Code: WA22R8870GV/ST Warranty: 1 Year Washing Capacity (kg): 22.0 kg Drum type: Swirl drum Pulsator: Stainless Pulstator Net Dimension (WxHxD): 686 x 1077 x 744 mm...
Samsung Twin Tub Washing Machine (8.5 Kg) WT85H3210MB/ST
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: WT85H3210MB/ST Dedicated Wash Tray Rust Proof Body Air Turbo Spin Drying Washing Capacity: 8.5 kg Body color: LIGHT GRAY Air Turbo: Yes Additional Cycle: Wash Selector: Normal...
Samsung 7Kg Front Load Washing Machine WW70J42E0IW/ST
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Stock Code: WW70J42E0IW/ST Warranty: 1 Year Washing Capacity (kg): 7.0 kg Body color: White Door: Crystal Gloss Panel Display: LED Bubble Soak: Yes Bubble technology: Yes Child...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: WA16T6260WW/ST Washing Capacity: 16.0 kg Body color: White Door: Whtie Panel Display: Inlay Panel Air Turbo: Yes Child Lock: Yes Deep Softner: Yes Delay End: Yes Door...
Samsung Twin Tub Washing Machine (14 Kg) WT16J8LEC/XST
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: WT16J8LEC/XST Air Turbo Drying System Reduce drying time Easy-to-iron Adjustable Leg: Yes Color (Body / Door): Light Gray / Silky Smog Color (Top Cover): Light Gray See-through...
Samsung 65-Inches Crystal UHD 4K TV UA65AU7000KXMR
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Stock Code: UA65AU7000KXMR Warranty: 1 Year Product Type: LED Series:7Screen Size: 65" Resolution: 3,840 x 2,160 Picture Engine: Crystal Processor 4K PQI (Picture Quality Index):...
Samsung 55-Inches Crystal UHD 4K TV UA55AU7000KXMR
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Stock Code: UA55AU7000KXMR Warranty: 1 Year Product Type: LED Series:7Screen Size: 55" Resolution: 3,840 x 2,160 Picture Engine: Crystal Processor 4K PQI (Picture Quality Index):...